iPhone 13 ၏အမြဲတမ်းတက်ကြွသောမျက်နှာပြင်သည်သင့်လက်၌အနီဖြစ်လိမ့်မည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone 13 ရဲ့အမြဲတမ်းဖန်သားပြင်ဟာသူ့ရဲ့လက်များအိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်
Luis Padilla | 20/07/2021 12:00 | iPhone ကို 13, NOTICIAS
iPhone 13 ကိုကြေငြာလိုက်ခြင်းသည်ပိုမိုနီးကပ်လာနေပြီးအခြားအရေးကြီးသောသတင်းများလည်းထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့အနည်းငယ်သာပြောခဲ့သည့်အရာသည်သင်၏အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်နိုင်သည်.
iPhone 13 ကိုလာမယ့်အချိန်မှာဒီစက်တင်ဘာလရဲ့စက်တင်ဘာလမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကနေနှစ်လပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့၎င်း၏အသစ်အဆန်းအကြောင်းကိုအများကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကင်မရာမှာအကောင်းဆုံး, အမြဲကြိုဆို, နှင့် 120Hz နှင့်အတူ၎င်း၏ True Motion မျက်နှာပြင်iPad Pro သည်မျိုးဆက်များစွာအတွက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြောစရာအနည်းငယ်သာရှိသည် - အမြဲတမ်းမျက်နှာပြင်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကိုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအတွက်ကောလဟာလများရှိခဲ့ပေမယ့်အရေးမကြီးပုံပေါက်တဲ့အရာတစ်ခုက iPhone ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပေမယ့် Mark Gurman ကဒီအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည်။
Apple Watch သည်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး“ Always On Display” (Series 5) မှစပြီး“ Always On Display” (Series 6) မှစပြီး Apple Watch ၏မျိုးဆက်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်တဲ့ Series XNUMX နဲ့လဲကျခဲ့ရသည်။ အချို့သုံးစွဲသူများသည်ဘက်ထရီပိုမိုသုံးစွဲမှုကြောင့်၎င်းကိုပိတ်ထားကြသည် အဖြစ်မှန်ကတော့သင်အဲဒါကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီဆိုရင်သူကသင့်ကိုပေးတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့မခက်ဘူးဆိုတာပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဘက်ထရီသည်ကုန်သွားသည်။ သို့သော်အက်ပဲလ်ကဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျသည်။ အကယ်၍ သင်အနက်ရောင်သည်အဓိကအားဖြင့်အရောင်ဖြစ်သောစက်လုံးများကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်မျက်နှာပြင်၏အနက်ရောင်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ပိတ်လိမ့်မယ် အဆိုပါနည်းပညာသည် iPhone 13 တွင်အလွန်ဆင်တူမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
လက်ပတ်နာရီတွင်သင့်လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲအချိန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် iPhone ပေါ်တွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်များစွာသွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ အက်ပဲလ်က၎င်းကို iPhone မော်ဒယ်အသစ်ထဲသို့ထည့်ပါက၎င်းသည်၎င်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချသင့်သည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? အမြဲမြင်နေသောသော့ခတ်မျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသမျှသည်အချိန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားသည့်ဖန်သားပြင်တစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်အသိပေးချက်များစသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏inရိယာတွင်ရာသီဥတုအဘယ်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်သနည်း။သို့မဟုတ်လာမည့်ပြက္ခဒိန်ရက်ချိန်းများ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အမြဲတမ်းမြင်ကွင်းပေါ်လာပါကသော့ခတ်မျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူရောက်လာသင့်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသောအရာဖြစ်သည်။
iOS 15 ကိုငါတို့သိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း Apple သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် iOS 15 သတင်းကိုနောက်ဆုံး Keynote တင်ဆက်မှုတွင်ပြသခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။ iPhone 15 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။ iPhone မော်ဒယ်သစ်သို့ပြောင်းလဲသွားမည့်သူများအတွက်၎င်းသည်သူတို့၏လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်စီစဉ်သူများအတွက်ဤသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းဖြစ်သည်။။ အကယ်၍ အမြဲတမ်းဖန်သားပြင်သည် iPhone 13 တွင်ပါ ၀ င်ပါကနောက်ဆုံး၌သော့ခတ်မျက်နှာပြင်အသစ်ကိုစောင့်ရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို 13 » iPhone 13 ရဲ့အမြဲတမ်းဖန်သားပြင်ဟာသူ့ရဲ့လက်များအိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်
iOS 15 ရှိ application များအတွက်အသုံးပြုနိုင်မှုရွေးစရာများကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ